Zisithoba iiyunivesithi zobunjineli boomatshini eCanada
Ngamana 21, 2020 UAdaeze Nwachukwu
I-9 yeeYunivesithi eziPhezulu zoBunjineli eCanada
Nazi iiyunivesithi eziphezulu zobunjineli boomatshini eCanada kuya kufuneka ufake isicelo njengomfundi wasekhaya okanye wamanye amazwe.
Ubunjineli boomatshini kuthiwa yeyona nto ibanzi kubunjineli; Kwanele ukuthi kwiimeko ezininzi ukuba ngumama wobunjineli. Kubandakanya isayensi yokusebenzisa imigaqo-nkqubo kunye neendlela zokusombulula iingxaki zobunjineli ukusuka kuyilo lokuqala ukuya ekwenziweni okanye ekuyilweni kwesiphumo sokugqibela sombono.
Ubunjineli boomatshini kubandakanya ezinye iindlela ezininzi ezibandakanya kodwa ezingaphelelanga: kwi-acoustics, i-Biotechnology, amandla, iirobhothi, uyilo oluncediswa yikhompyuter, uhlalutyo lolwakhiwo phakathi kwabanye abaninzi. Ubunjineli boomatshini kufundiswa ngcono kwamanye amazwe ehlabathi apho isiphumo sokusebenza kwesifundo sitshona ngokunzulu emphefumlweni wabafundi naseCanada lelinye lala mazwe.
ICanada yindawo elungileyo yokufunda ubunjineli boomatshini, mhlawumbi kuba zininzi iiyunivesithi eziphambili zobunjineli eCanada ezifundise ezi zifundo kule minyaka idlulileyo. Apha ngezantsi, kukho uluhlu lwezikolo ezisithoba eziphezulu apho unokufundela khona ukuba yinjineli eqinisekisiweyo yoomatshini.
IYunivesithi yaseBritish Columbia iSebe lezoBunjineli boMatshini
IYunivesithi yaseToronto iSebe lezoBunjineli boMatshini kunye nezoShishino
Isikolo seYunivesithi yaseMcGill yezoBunjineli boMatshini
IYunivesithi yase-Alberta yeCandelo lobuNjineli
Icandelo leYunivesithi yaseMcMaster yezoBunjineli boMatshini
IYunivesithi yaseCalgary yeFakhalthi yoBunjineli boMatshini
IYunivesithi yaseWaterloo kwiSebe lezoBunjineli boMatshini
IYunivesithi yaseOntario Institute of technology
KwiYunivesithi yaseBritish Columbia
IYunivesithi yaseBritish Columbia isebe lobunjineli boomatshini sesinye sezona zikolo ziphambili zobunjineli boomatshini eCanada kwaye isikolo nawuphi na umntwana okwishumi elivisayo kwihlabathi liphela uya kufumana umdla.
Ukwamkelwa kubunjineli boomatshini e-UBC kunyaka wokuqala kukhuphiswano kwaye kufuna bonke ubukrelekrele kunye nobukrelekrele obunokufuneka ukulandela isidanga sobunjineli kwikholeji. Ihlala isekwe kwinkqubo ebanzi ethathela ingqalelo izinto zokuzonwabisa, inkuthazo, imvelaphi engeyiyo yokufunda kunye nothando.
Nangona kungenjalo, abafundi banokufuna ukwamkelwa kubunjineli boomatshini e-UBC kunyaka wesibini emva kokufumana inkqubo yobunjineli yonyaka wokuqala exhaphake kuwo onke amasebe obunjineli e-UBC.
I-avareji yemali yokufunda kwizifundo zabafundi basekhaya kwiYunivesithi yaseBritish Columbia iphakathi $ 5,000 ku $ 8,000 ngelixa abafundi bamanye amazwe baphakathi $ 30,000 ku $ 50,000.
Imirhumo yokufunda kwabafundi kwi-UBC inokuhlawulwa ngezavenge ezi-3 ngonyaka kwaye le ntlawulo yentlawulo yeefizi zesikolo iphakathi $ 2,000 ku $ 12,000 kubafundi basekhaya kunye $ 3,000 ku $ 15,000 kubafundi bamazwe ngamazwe.
Ngapha koko, iifizi zezifundo ze-UBC zijongwa rhoqo ngonyaka yiBhodi yabo yaBaphathi ngoko kuyacetyiswa ukuba undwendwele iphepha labo lewebhu elisemthethweni ukuqinisekisa iifizi zabo zesikolo. Ungaqinisekisa ifayile ye- Iinkqubo ze-UBC PhD zemirhumo yokufunda, i Iinkqubo zeenkosi ze-UBC zemirhumo yokufunda kwaye i Iinkqubo zesidanga sokuqala ze-UBC.
Ubunjineli boomatshini kwiYunivesithi yaseToronto baziwa kwihlabathi liphela ngokusetyenziswa kwekharityhulam esebenzayo. Ithiyori yenziwa ngokufanelekileyo kwilabhoratri kunye nabafundi abasebenza ngokuzimisela kwiiprojekthi ezahlukeneyo. Ukwamkelwa kuvulelekile kubafundi bamazwe aphesheya kunye nakwilizwe.
Abaphumelele eyunivesithi balandela ikhondo labo lomsebenzi kwiindawo ezahlukeneyo ezinje ngeenkqubo zonxibelelwano zoyilo, iikhompyuter, izixhobo zonyango ezincedisayo, uyilo lweemoto, njl. Uluhlu lweeyunivesithi eziphambili zobunjineli eCanada alunakugqitywa ngaphandle kokuba iYunivesithi yaseToronto yenze indawo.
Iimali zesidanga sokuqala kwizifundo zobunjineli zabafundi bamanye amazwe kwiYunivesithi yaseToronto malunga $ 58,680 / ngonyaka kwaye malunga $ 14,180 / ngonyaka kubafundi basekhaya. Unako ukuhlala ufumanisa iifizi zokufunda ngoku kwiphepha lewebhu elisemthethweni lemali yokufunda.
IYunivesithi yaseMcGill yenye yeeyunivesithi eziphambili zobunjineli eCanada: isebe lobunjineli boomatshini kwiYunivesithi yaseMcGill linembali yodumo yokugqwesa kuphando nasekufundiseni.
Abafundi bavezwa yinkqubo ende yesikolo yokuqonda, uyilo, ukumiliselwa kunye nokusebenza kweenkqubo zoomatshini.
Abathweswe izidanga zobunjineli boomatshini kwiyunivesithi yaseMcGill bakulungele ukusebenza kumacandelo e-aerospace, amandla, ukuvelisa, oomatshini, kunye nezothutho ekupheleni kwesifundo.
Imirhumo yokufunda eyunivesithi inyuka ngaphaya $50,000 kwezinye iimeko zabafundi bamanye amazwe kwaye kuncinci kakhulu kubafundi basekhaya. Ungahlala ujonga iifizi ngokwakho iphepha lemirhumo.
IYunivesithi yaseMontreal kutshanje ikwinqanaba le-85th kwinqanaba leyunivesithi yehlabathi i-2020 yeyona yunivesithi iphambili yophando.
Ukufuna isidanga sobunjineli boomatshini eyunivesithi kufanele ukuba kube liphupha elizalisekayo kwabanye abantu abancinci abanqwenela ukufumana isiseko esiqinileyo kunye nomsebenzi wobunjineli boomatshini.
Malunga namandla e-13 kunye nezikolo ezininzi ezinxulumene nayo, iyunivesithi ibonelela ngolwazi olomeleleyo lwemigaqo elawula ubuchwephesha kwiinkalo ezininzi zeMechanical Engineering.
Ngokubanzi, iYunivesithi yase-Alberta yeFakhalthi yobunjineli ubukhulu becala yamkelwe njengesinye sezona zikolo ziphambili zobunjineli eCanada.
Enye indlela eqinisekileyo yokungenzi mpazamo xa ukhetha iYunivesithi yobunjineli boomatshini kukukhetha iYunivesithi yaseAlberta.
Isikolo sibonelela ngenkqubo esekwe ngokubanzi eyenza ukuba abaphumeleleyo bakwazi ukungena kwimisebenzi eyahlukeneyo. Ukuba yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zobunjineli boomatshini eCanada, abafundi bezobunjineli boomatshini apha bafumana ulwazi oluchanekileyo lobunjineli boomatshini ngokuthatha izifundo kwiindawo ezininzi njenge: i-dynamics, i-fluid mechanics, i-thermodynamics kunye nezinye ezininzi.
ISebe lobuNjineli boMatshini kwiYunivesithi yaseMcMaster phantsi kweFakhalthi yoBunjineli yenye yeendawo ezilungileyo zokufunda ubunjineli boomatshini eCanada. Isikolo samkela abafundi basekhaya nakwamanye amazwe kwaye bonke abafundi baneenkqubo zokufunda abanokufanelekela.
Ukuba ufaka isicelo sokufunda ubunjineli boomatshini kwiYunivesithi yaseMcMaster, kulindeleke ukuba ube nolwazi olusisiseko lwemathematics, isayensi esisiseko kunye nobunjineli obuyisiseko.
Ekupheleni kwenkqubo, abafundi baya kuba bephumelele ukuba bafundiswe kwimigaqo yoyilo kunye nokwenza, ngokubandakanya ubungakanani bezoqoqosho kwiinkqubo zobunjineli ukusuka kwenye yeeyunivesithi eziphambili zobunjineli eCanada.
Isikolo esikwesinye sezona zixeko zixabisekileyo zesizwe, iYunivesithi yaseCalgary liziko eliphilayo, elikhulayo nelithembisayo kunye necandelo lobunjineli elaziwayo kwilizwe nangaphaya.
Ukuza kuthi ga ngoku, ifumene igama elihle lokukhokela njengesinye sezikolo zobunjineli boomatshini eCanada. Bafundisa abafundi ukuba benze uphando, bayile, bavavanye, baphuhlise kwaye bakhe uluhlu olubanzi lwezixhobo zoomatshini.
Ukuba ucwangcisa ukufumana isidanga kubunjineli boomatshini, ungazenzela ngokwakho ukulunga kokufaka enye yeeyunivesithi eziphambili zobunjineli eCanada njengenketho okanye olona khetho lwakho lubalaseleyo. Isikolo samkelwe njengesinye sezona zikolo zinkulu kulo lonke elaseKhanada.
Njengenye yezona zikolo zinkulu zeCanadas zobunjineli, abafundi bakhe bathabathe iwonga lokufumana amathuba emisebenzi kunye nokuhlawulwa kwizifundo zoqeqesho ngaphezulu kwezona zikolo.
Cinga ubunjineli boomatshini eCanada, emva koko cinga le yeyona yunivesithi iphambili yobunjineli eCanada.
Ukusuka kwezobunjineli ezisisiseko kulo lonke ulwazi olwaneleyo olufunekayo kwimfundo njengonjineli woomatshini, iYunivesithi yaseOntario tech ikufumene konke okufunekayo.
Eyona Yunivesithi yoBunjineli boMbane eCanadaIzikolo zobunjineli boMatshini eCanadaIiYunivesithi eziPhezulu zoBunjineli eCanada
Post Previous:$ 18,900 UG & PG Isibonelelo soMbindi Mpuma Mpuma sabaFundi beIran kwiYunivesithi yaseKhanada eNtshona, 2020
Okulandelayo Post:Iikhosi eziphambili ze-5 zoyilo eziBalulekileyo kubuNjineli boMatshini
Juni 2, 2021 kwi-7: 12
Enkosi ngolu lwazi
Ibhlog inolwazi kakhulu. Ndijonge phambili ekufundeni ngakumbi kuwe enkosi